Ukuba uceba uhambo oluya eLos Angeles kwaye ungumtsalane wokubonisa intetho, nolu luhlu olukhawulezayo lwemiboniso ethandwa kakhulu kwifilimu kweso sixeko kunye nolwazi malunga ngamnye. Eya eNew York kunye nomdlalo womdlalo womdlalo ? Kukho ininzi yokwenza khona, kwakhona.
Pete Marovich-Pool / Getty Izithombe Iindaba / Getty Izithombe
IConan, eneenkwenkwezi zeConan O'Brien, kunye nommemezeli Andy Richter , amateyibhile eBurbank, Calif.
Abaninzi bacinga ukuba u- Jimmy Kimmel uyinambatho efunyenwe, kodwa ukususela ekuqaleni kwakhe ngo-2003, uye wakhonza u-ABC kunye nokungena kwakhe kumdlalo wexesha lomdlalo weentetho ebusuku. Uhlobo lukaKimmel lwe-humor lusetyenziswe kakuhle kwizindlu zasekholeji, ngoko ulungiselele ukuba udibanisa. Uluhlu lwabalandeli be-wacky, olunjenge "Uncle Frank" Potenza, "uCousin Sal" u-Iacono noJake Byrd, Umdlali we-comedic u-Anthony Barbieri, unike le ngqungquthela yeengcingo zayo, njengokuba i-band, enye yeyona ndlela eclectic ejikelezayo. Iimpawu zeKimmel ngeveki nge-7 ntambama PT kwi-El Capitan Theater eHollywood, Calif.
Iimpawu zeJimmy emva kwezona zibonisa-ngo-7: 45 ntambama - ukwenzela ukuba ube njengezobugcisa njengoko kunokwenzeka. Ulwazi lweTikiti
I-Ellen DeGeneres Bonisa
Umdlali we-American Idol uKris Allen kunye nomninimzi wokubonisa umkhosi uEllen DeGeneres. UMichael Rozman / Warner Bros
Kunzima ukubeka umnwe kuba kutheni abaninzi banxulumana no-Ellen. Ukuthoba kwayo kunye nokudansa kweenyawo kukutsala abaninzi, kodwa mhlawumbi ngaba ngamaxesha amaninzi ahlazileyo kunye neempuphu ezenza umbukiso ube mnandi kakhulu ukubukela. Mhlawumbi kunjalo ukuba uvela "njengomntu wangempela." Ukuba uEllen yindebe yakho yetiyi - kwaye andinakholwa ukuba ayikho - unokumjonga ngaphandle kweentsuku zeveki, ezivela kwiWarner Bros. Studios eBurbank, Calif.
Ixesha kunye nexesha lokuthabatha ziya kutshintshwa, ngoko jonga ulwazi lwakho lwetikiti xa lufika. Ulwazi lweTikiti
I-late Late Show kunye noCraig Ferguson
Kuninzi ukuthanda ngoCraig Ferguson, kunye nazo zonke iimbonakaliso entshonalanga ukuba abo bethu kwi-About Talk Shows banokuthanda ukubona, yiLate Show Late Show kunye noCraig Ferguson . (Ewe, kakuhle, iConan, naye.) UFerguson uyaziwa ngokuba yi-monologs, ekhutshwe ngokungathi i-buddy yakho ibhetele yayikuxelela ibali elincinci kwaye ichaza ixesha elichaphazelekayo, ukuhleka kweentlanzi, ubuqili obubukhali kunye nokunyaniseka. Ewe, siyathanda uCraig. Mboneni kwi-CBS iTeknesi yeTekisi eLos Angeles.
Ngaba ufuna iingcebiso? UDkt. Phil ulahla. Khangela ugqirha ohambahambayo uhamba nomntu, i-minefield yangasese-kwaye ufumanisa ukuba baphuma ngaphesheya. UDkt Phil amathandathu kwiParamount Studios eLa
UDkt Phil amathoni kabini ngosuku ngoLwesibili, ngoLwesithathu noLwesine. Abo bahamba kwimiboniso yasekuseni mabafikele ngaphaya kwe-8: 30 ekuseni. Abaza kumboniso wesibini bafanele bafike khona ngaphandle kwe-9: 30 ekuseni. Ixesha lokubonisa livela ngo-Agasti ukuya ekuqaleni kukaDisemba, kwaye emva koko ngoJanuwari ukuya kuMeyi.
Umnxeba wokugqibela ngeCaronon Daly
Nangona iFowuni yokugqibela ithathe ukuphuma kwi-studio kwaye yenza indawo-ndawo ikhupha kaninzi kunoko, unako ukufumana amathikithi uze ubone i-Daly yamkele iinqununu eziza kufika kunye neziza. Thatha umboniso kwi-NBC Studios eLos Angeles.
Imiboniso yeetampu iintsuku ezintlanu ngeveki ngo-5: 30 ntambama Ulwazi olungakumbi »
Intetho yokubonisa umboniso kunye nomlobi we-Chelsea Handler. Getty Images / Jesse Grant
I-Comedienne iphendulela umboniso weentetho umgca we-Chelsea Handler's self-deprecating udlala i-pitch epheleleyo kunye nefomathi yobusuku. Yaye ibonisa ukuba iyingqayizivele, ngokuba idibanisa ifomati ejikelezayo yomboniso ofana nezoPolitiko ezingalunganga kunye nodliwano-mboleko oludlulileyo kwi-desk. Ithenda ye-Chelsea e-LA
Kutheni Kuthetha Ukuba Ubuqhetseba Ngokobudlelwane NoSathana?
Kubaluleke Kangakanani iCorporate?
UYona kunye ne-Whale-Intetho yeBhayibhile
Iimfuno ze-Waxmyrtle yaseMzantsi
Indlela yokuphepha ngokuPhelela iPraint yeTraven ephelile
Izixhobo zoMculo zeCalical Musical Instrument
'Outliers' nguMalcolm Gladwell - Imibuzo Yemibuzo Yengxoxo yeKlabhu